China Calcium Gluconate Injection 24% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
Inaliti ye-calcium Gluconate 24%
I-ml ngayinye iqukethe:
I-calcium gluconate: 240mg
Isikhangiso se-Excipients: 1ml
Njengosizo ekwelapheni izimo ze-hypocalcemic ezinkomeni, emahhashini, ezimvini, ezinjeni nasemakati, isib. Umkhuhlane wobisi ezinkomeni zobisi.
Xhumana nodokotela wezilwane ukuze uphinde uhlolisise ukuxilongwa kanye necebo lokwelapha uma kungekho ngcono emahoreni angama-24. Sebenzisa ngokuqapha ezigulini ezithola i-digitalis glycosides, noma isifo senhliziyo noma so-renal. Lo mkhiqizo awunazo izinto zokubulala. Lahla noma iyiphi ingxenye engasetshenziswanga.
Ukusabela Okubi (imvamisa nobucayi)
Iziguli zingakhalaza ngokushoshozela kwemizwa, umuzwa wengcindezelo noma amaza okushisa kanye ne-calcium noma ukunambitheka okuluhlaza kulandela ukuphathwa ngemithambo kwe-calcium gluconate.
Ukujova ngomjovo osheshayo we-calcium usawoti kungadala i-vasodilation, kwehle umfutho wegazi, i-bardycardia, i-arrhythmias yenhliziyo, i-syncope nokuboshwa kwenhliziyo. Ukusetshenziswa kweziguli ezenziwe nge-digital kunganciphisa ama-arrhythmias.
I-necrosis yendawo kanye nokwakheka kwethumba kungenzeka ngenaliti yemisipha.
Lawula ngomjovo we-intravenous, subcutaneous noma we-intraperitoneal usebenzisa amasu afanele we-aseptic. Sebenzisa ngemithambo yegazi kumahhashi. Isixazululo esifudumele sokushisa komzimba ngaphambi kokusetshenziswa, bese ujova kancane. Ukuphathwa kwe-intravenous kunconywa ukwelashwa kwezimo ezinzima.
Izinkomo namahhashi: 250-500ml
Izinja namakati: 10-50ml
Isilinganiso singaphindwa ngemuva kwamahora ambalwa uma kudingeka, noma njengoba kunconywe udokotela wezilwane. Hlukanisa imijovo engaphansi kwamasayithi amaningi.
Langaphambilini I-Butaphosphan ne-Vitamin B12Injection10% + 0.005%
Olandelayo: Cefquinome Sulfate Inaliti 2.5%
Cefquinome Sulfate Inaliti 2.5%
Inaliti ye-Oxytetracycline 5%
Marbofloxacin Injection 10%
I-Kanamycin Sulfate Injection 5%